Foto Google enweworị onye nchịkọta akụkọ vidiyo dị ọhụrụ | Gam akporosis
Foto Google bidoro ịpịpụta onye ndezi vidiyo ọhụrụ
Ọ bụrụ na ọnwa gara aga Google kwuputara na ọ na-arụ ọrụ na nchịkọta vidiyo vidiyo ọhụrụ maka Foto, igwe ojii gị maka foto na vidiyo gị ma na ọbụna ugbu a ị nwere ike bufee ya niile foto iCloud na ya, mmelite ahụ kwuru amalitelarị iru igwe anyị.
Fọdụ n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ya bụ ya ihe karịrị 30 elu njikwa dezie vidiyo, na ọ bụ eziokwu na ebe Google ekwuputabeghị ihe ọ bụla na-eruteghị. Ọ gwụla.
Ihe ngosi ihe onyonyo Google Google ohuru gunyere ngwaọrụ iji belata vidiyo, gbanwee echiche, mee ka vidiyo ahụ kwụsie ike na tinyekwa nzacha; ya mere ama m kwadebe Adobe na jụụ Premiere Rush (ọ bụ ezie na a na-akwụ ụgwọ ọrụ a).
Dị ka anyị nwere usoro ọzọ ntọala iji melite ogo onyonyo vidiyo dị ka nchapụta, iche, saturation na hue nke vidiyo.
Achọtara m ihe zoro ezo na March Feature Drop for Pixel, onye nchịkọta vidiyo na-echere ogologo oge. @AndroidPolice @ihenuche @AndroidAuth pic.twitter.com/3U6l9sYktj
- Andrew C (@ AndrewClarkin57) March 10, 2021
Iji nwee ike idezi vidiyo ị ga-pịa bọtịnụ ahụ n'onwe ya nke mere na nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ na-egosi ma ọ bụrụ na ịnwee melite arụnyere na mkpanaka gị (lelee thelọ Ahịa Play). E wezụga ngwaọrụ ndị a kpọtụrụ aha dị ka ihe ọkụkụ vidio, mmezi, na nzacha, ee pịa «ọzọ», anyị nwere ike ịnweta ọrụ nrịbama.
Nhọrọ ịkpụ vidiyo nwere akụkụ dị iche iche maka ụfọdụ ahaziri na ndabara na otu na ọnọdụ efu. Anyị nwekwara nhọrọ iji gbanwee ma gbanwee echiche na bọtịnụ iji tọgharịa mmezi niile emere.
Taabụ mgbanwe bụ: nchapụta, iche, isi ọcha, ọcha, onyinyo, ọchịchịrị, saturation, ikuku, ink, na anụ ahụ ma ọ bụ ụda olu.
La nweta nkwalite vidiyo Google na ihe ngosi vidiyo ohuru ya mere ọ dị ka ọ na-abịa site n'akụkụ ihe nkesa ma ọ ga-abụ okwu nke awa na ụbọchị tupu anyị niile nwere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Foto Google bidoro ịpịpụta onye ndezi vidiyo ọhụrụ
Egwuregwu ịchụ nta 10 kacha mma maka gam akporo
Ọrụ kacha mma igwe ojii na-akwụ ụgwọ n'efu